Archive du 20161104
Madama deba ao Iavoloha Manimbazimba minisitra
Miseho tsikelikely ny ady an-tranon�ny mpitondra noho ny fanjakazakana ataon�ny olona sasany akaiky ny filoha, izay ny namany ihany no ataony mahita faisana.
Minisitry ny vola Gervais Rakotoarimanana Ankasitrahan�ny depiote MAPAR
Mety tsara aminay ny nataon�ny minisitry ny tetibolam-panjakana Atoa Rakotorimanana Gervais,
Savorovoro eto amin�ny firenena Ny HCC no fositra, hoy ny jeneraly Ramakavelo
Noho ny lal�mpanorenana tsy voahaja no anton�ny savorovoro politika misy amin�izao fotoana izao ary tompon�andraikitra amin�izany ny fitsarana avo momba ny lal�mpanorenana (HCC), hoy ny jeneraly D�sir� Ramakavelo.
Hoporetina indray ny vahoaka Hampandoavina 5 000Ar isan�olona
Raha tsy hisy ny sampona ka holaniana ny volavolan-dal�na mifehy ny tetibolam-panjakana 2017 dia ho raikitra fa tsy maintsy handoa hetra 5 000Ar ao anatin�ny iray taona ny olona eo anelanelan�ny 21-60 taona.
Honor� Rakotomanana �Tena misy mpitsoa-ponenana tonga eto�
Nitsidika tamim-pomba fanajana ny Filohan�ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honor�, tetsy amin�ny Lapan�Anosikely omaly alakamisy, ny fikambanana miahy ireo mpitsoa -ponenana avy amin�ny faritra Atsimon�i Afrika notarihan�ny Filoham-paritra lefitra Veronica Irima Modey �Ebi.
Asandratro ny fireneko �Mbola zanatany Frantsay isika�
Nivoaka tamin�ny fahanginany indray omaly ny fikambanana Asandratro ny fireneko tamin�ny alalan�ny filoha lefiny Ranaivo Sata manoloana ny fampiantranoantsika ireo fivoriana sy lalao karakarain�ny Frantsay.
Manahoana ry Jean a ! Toraka voninkazo aloha tamin�ilay fandefasana taratasy tany amin�ny matanjaka sy ry reny malala e ! Tena henjana mihitsy r�ise ry Jean ity ataon-dry be sitrapo sy be di-doha a ity a !
Raharaha Soamahamanina Hivoaka anio ny didim-pitsarana
Hivoaka anio ny didim-pitsarana ireo olona 5 mianaka nosamborina sy nampidirina am-ponja vonjimaika noho ny raharaha Soamahamanina.
Distim Boriborintany Voalohany Hikarakara ny vahoaka mialoha ny orana
Noho ny fangatahan�ireo mponina eny amin�ny faritra iva eny Andranomanalina sy eny Andohatapenaka dia nidina nijery ifotony ny tatatra tsentsin�ny loto isan-karazany teny amin�ireo toerana ireo ny alarobia 2 novambra
Fandravana trano teny Tsarasaotra-Ivato Arirarira hatrany ny vahoaka
Mampimenomenona ny olona ny fanonerana ny fandravana trano sy fanotofana tanimbary teny Tsarasaotra-Ivato noho ny fanamboaran-dalana ilaina amin�ny frankofonia.
Village de la Francophonie Ho vita amin�ny 10 novambra ny asa
Miasa andro aman�alina tato anatin�ny roa volana latsaka kely izao ny eny amin�ny tan�nan�ny Frank�f�nia Andohatapenaka ary nambara omaly fa ho voahaja ny datin�ny 10 novambra hahavitan�ny asa rehetra.
Vidim-panafody Miankina amin�ny sandan�ny Ariary
Ankoatra ny kojakoja fampiasa amin�ny fiainana andavanandro, ny jiro, ny rano dia anisan�ny mampitaraina ny maro ihany koa ankehitriny ny fiakatry ny vidim-panafody. Karazany vitsy monja no fantatra fa tsy dia mihetsika firy ny vidiny.
Tetibolan� ny fety 200 000 Ar isam-pianakaviana raha kely indrindra
Roa hetsy ariary isam-pianakaviana raha kely indrindra ny vola tsy maintsy homanina hiatrehana ny fetin�ny Krismasy sy ny faran�ny taona. Samy manana ny fomba hahazoany manangona io mari-bola io ny tsirairay amin�ny ankapobeny.
Alaivo ny lesona !
Mila ovaina indray angamba ny fomba filazana azy sao mba izay no mety hampiditra kokoa ny tiana ambara any an-doha sy ny tsikalam-pieritreretan�ny tsirairay avy.